Purigatori Inotaurwa Nezvayo muBhaibheri Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Catalan Cebuano ChiSutu (South Africa) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba
MuBhaibheri hamuna shoko rekuti “purigatori,” uye haridzidzisi kuti mweya yevanhu vakafa inonotsveneswa mupurigatori. * Chimboona zvinotaurwa neBhaibheri nezvechivi uye rufu woona kuti zvakasiyana papi nedzidziso yepurigatori.
Kutenda muropa raJesu ndiko kunotsvenesa munhu, kwete nguva yaanotora ari munzvimbo isiko zvachose, inonzi nevanhu purigatori. Bhaibheri rinoti, ‘Ropa raJesu Mwanakomana waMwari rinogeza zvitadzo zvedu zvose’ uye Bhaibheri rinotiwo, “Jesu Kristu . . . akatisunungura muzvitadzo zvedu neropa rake.” (1 Johani 1:7; Zvakazarurwa 1:5, Bhaibheri rine Apokirifa) Jesu ‘akapa upenyu hwake kuti hudzikinure vanhu vazhinji’ kuti vakanganwirwe zvivi zvavo.​—Mateu 20:28, Bhaibheri rine Apokirifa.
Vakafa havana chavanoziva. “Vanhu vapenyu vanoziva kuti vachafa, asi vakafa havana chavanoziva.” (Muparidzi 9:5, Bhaibheri rine Apokirifa) Munhu anenge afa haarwadziwi, saka haatsveneswe nemoto wepurigatori.
Kana munhu afa haazomborwadziswi nekuda kwezvivi zvaakaita. Bhaibheri rinoti, “Mubayiro wechivi ndirwo rufu” uye rinotiwo “anenge afa asunungurwa pachivi.” (VaRoma 6:7, 23) Rufu ndicho chirango chakakwana chechivi.
Chii chinonzi purigatori?
Chechi yeRoma inodzidzisa kuti purigatori inzvimbo yekuti mweya yevanhu vanenge vafa inoenda ichinokumbira kuti vanhu vacho varegererwe zvivi zvavo vobva vatsveneswa. * Bhuku reChechi yeRoma rinonzi Katikazi rinoti kutsveneswa uku ndiko kunodiwa kuti “munhu anyatsova mutsvene kuti azoenda kunonakidzwa kudenga.” Bhuku reKatekazi rinowedzerawo richiti “Chechi inodzidzisa kuti . . . kune moto unotsvenesa,” sezviri kuratidzwa pamufananidzo uri munyaya ino. Asi izvi hazvimo muBhaibheri.
Dzidziso yepurigatori yakabva kupi?
VaGiriki vekare vaitenda dzidziso yepurigatori uye vaitenda kuti kana vanhu vafa mweya yavo inoenda kune imwe nzvimbo inonzi Limbo. Achitevedzera zvaitaurwa nevaGiriki, Clement wekuAlexandria akataura aine chivimbo kuti vakafa vanofanira kutsveneswa pachivi nemoto. Asi Pope Gregory I ndiye akataura zvakasimba kuti dzidziso yekuti kune moto wepurigatori ndeyechokwadi, maererano nezviri mubhuku rinonzi The History of Christian Doctrines. Bhuku iri rakawedzera kuti Gregory, uyo akanga ari papa kubva muna 590 kusvika muna 604 C.E., “ndiye anonyanya kunzi akatanga dzidziso yepurigatori.’” Chechi yeRoma yakatsanangura dzidziso yepurigatori pamusangano weLyons wakaitwa muna (1274) uye weFlorence wakaitwa muna (1439), neweTrent wakaitwa muna 1547.
^ ndima 3 Bhuku rinonzi Orpheus: A General History of Religions paraitaura nezvepurigatori rakati, “Mumabhuku eEvhangeri hapana panotombotaurwa nezvayo.” New Catholic Encyclopedia inotiwo: “Paongororo dzakaitwa, zvakaonekwa kuti dzidziso yechechi yeRoma yepurigatori haibvi muMagwaro matsvene, asi inobva patsika dzevanhu.”​—Second Edition, Volume 11, peji 825.
^ ndima 8 Ona New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Volume 11, peji 824.
Ndiani Anoenda Kuhero?
Vanhu vakanaka vanoenda kuhero here? Munhu anogona kubuda muhero here? Hero icharamba iriko nokusingaperi here? Bhaibheri rinopindura mibvunzo iyi.